အတွေးအမြင် Archives - BuzzFeed Myanmar
ဆရာမ ဂျူးနှင့် ဆရာ အကြည်တော် ထိပ်တိုက်တွေ့ကြလေသော်..
အကြည်တော် – ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အရွယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကို မြင်လိုက် ရတာ ညနေခင်း ဆည်းဆာ အလှကို မြင်လိုက်ရသလိုပဲ။ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မဝနိုင်ဘူး။ သိပ်အေးချမ်းပြီး ကျက်သရေ ရှိတာ။ လူတိုင်း တသသနဲ့ တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နှမျောစရာ ကောင်းတာက… မကြာခင် နေဝင်တော့မှာလေ…။ ခိခိ
ကျောင်းသားကျောင်သူတွေ ရဲ့ ပညာအရည်အချင်းကို repot card နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ကြတော့မှာလား?
”တော့်သား report cardကြည့်ဦး
အဆင့်က တစ်ခါမှ ၁၀ အတွင်းမဝင်ဘူး”
”မိန်းမရယ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းကို report card နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင်
”သင်ခန်းစာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်မှုရှိမရှိနဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်။
ညကျရင် ငါမေးပြမယ် ။ ငါ့သားအကြောင်းငါသိတယ်”
ကျမတို့ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကို မဖူးဖြစ်တာ ၁၀ နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ ကမှ Cable လဲစီးပြီးဘုရားဖူးဖြစ်တော့ Cable စီးရတာလူကြီးတွေ အတွက်အတော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ် ။အချိန်ကုန်လဲသက်သာတယ် ။ ရှုခင်းတွေလဲကြည့်ရတယ် ။ တစ်ခုပဲ Cable စီးဖို့ကားကိုအရင်စီးပြီးလမ်းတစ်ဝက်ကျမှ Cable ကိုတက်စီးရတော့ တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တော့ဖြစ်တာပေါ့ ။
ဘာသာခြား နဲ့ယှဉ်ပြီးဆိုင်ဖွင့်တိုင်း မြန်မာတွေဆိုင်ပြုတ်ကုန်တဲ့အကြောင်းအရင်း
ယခုဆိုလူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။လေး ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါဆိုင်ခွဲတွေထပ်ဖွင့်နိုင်တယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းအထိုင်ကြလို့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကြာရင် ဆိုင်ခွဲအနည်းဆုံးသုံးခုဖြစ်သွားပြီ။မြန်မာဆိုင်နဲ့ဘေးချင်းယှဉ်လာဖွင့်ရင် မြန်မာဆိုင် သိပ်မကြာခင်ပြုတ်ပြီးပြေးရပြီ။
မသာ ပါးစပ်ထဲက နှိုက်စားသူများ။ မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နိူက်ယူတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီလား
ဒါ့ကြောင့် ပြောပါတော့မည် သမ္မတကြီးခင်ဗျား။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် မိသားစုနှင့်ခွဲခွါ၍၀မ်းရေးအတွက် ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကာရှာဖွေစားသောက်ပြီးပြည်တွင်းရှိမိသားစုများထံသို့ထောက်ပံ့ငွေပို့ပေးနေရရှာသောမြန် မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပနိုင်ငံတွင်ဆုံးပါးသွားသည့်အခါ ကျန်ရစ်ခဲ့သောမိသားစုများ၏ဆန္ဒအရမြန်မာပြည်တွင်းသို့သေဆုံးသွားရရှာသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ရုပ်ခန္ဓာအား လေယာဉ်ဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားပြည်ပနိုင်ငံမှဝန်ထမ်းများသည် လိုလေသေးမရှိကူညီပေးခဲ့၍ ထိုသေဆုံးသူ မြန်မာနိုင်ငံသား၏ရုပ်ခန္ဓာမှာမြန်မာပြည်ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့လျောလျူစွာရောက်ခဲ့သော်လည်း သူ၏ရုပ်ခန္ဓာအားမြန်မာပြည်လေဆိပ်တွင် လွယ်ကူစွာထုတ်ခွင့်မရသည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့သည်။
“ကျွန်တော် ဘာလို့ အထီးကျန်နေအုံးမှာလဲ…. ?”
တိုက်ဆိုင်မှုရှိခဲ့လျှင်….တစ်ခါတလေမှာ… ကိုယ့်ရဲ့အလေးနက်စကားတစ်ခွန်းကို မထီမြဲ့မြင်ပြုခံခဲ့ရတာတွေရှိမယ်တစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းမဆုံးခင် နားမထောင်ဘဲ တစ်ဖက်ကိုအာရုံစိုက်သွားတာမျိုးတစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ကိုရှောင်ဖယ်ထားကြတာမျိုးတစ်ခါတလေမှာ.. ကိုယ့်ကို ဟန်ဆောင်ပြီး ပက်သက်နေကြတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့….